Degso Safari loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (36.70 MB)
Iyada oo ay ku xirantahay qaab fudud oo casri ah, Safari ayaa kaa jiidaya jidkaaga inta lagu guda jiro daalacashada internetka waxayna kuu ogolaaneysaa inaad yeelato khibrada ugu xiisaha badan internetka inta aad dareemeysid amaan. Barnaamijkan, oo ay Apple aad ugu hanweyn tahay xawaaraha iyo amniga, ayaa lagu sii wadaa in loo horumariyo nidaamyada hawlgalka ee Windows.
Iyada oo leh astaamo badan sida waxqabadka degdegga ah, istiraatiijiyadda iyo isdhexgalka fudud, isticmaalka fudud, waxyaabaha ugu cadcad, xannibaadda pop-up, raadinta nuxurka, marin habeysan, taageerada RSS ee isku dhafan, foomka tooska ah ee loo buuxiyo, meelaha qoraalka ee la beddeli karo, marinnada qarsoon iyo kuwa gaarka ah, iyo xulashooyinka amniga ee horumarsan Safari hadda waa beddel weyn oo loogu talagalay isticmaaleyaasha Windows.
Ku qalabaysan hal-abuurnimo badan iyo astaamo sida HTML 5 taageero offline, calaamado buuxa oo ka socda tijaabada Acid 3, Apple Safari waxay diyaar u tahay inay khibradaada internetka ka dhigto mid aamin ah oo dhakhso leh.
Cabirka Faylka: 36.70 MB